शैम्पू "Estelle" स्वास्थ्य को लागि डिजाइन गरिएको छ
को ठूलो बीच डिटर्जेंट बाल लागि, आधुनिक उद्योग को एक प्रशस्त प्रदान गर्दछ, त्यहाँ महिला बीच धेरै लोकप्रिय छन् कि ती छन्। Estel - कस्मेटिक लाइन, टनिक, रङ्ग, मइस्चराइजिंग शैंपू र कस्मेटिक्स बनेको छ जो, लामो कमजोर र क्षतिग्रस्त किसिमहरु हेरचाह।
शैम्पू "Estel" keratin जटिल, समर्थक-भिटामिन बी शैम्पू को एक सानो राशि froth गठन गर्दा, उच्च फोमिंग विशेषताहरु अन्य डिटर्जेंट देखि समावेश गर्दछ। यो सम्पत्ति पूर्ण स्याम्पु "Estelle क्लासिक" छ। आफ्नो कपाल प्राप्त घनत्व पछि, चिल्लो हुन्छन्। तिनीहरूले भ्रमित प्राप्त छैन किनभने तिनीहरूले सजिलै कंघी गर्न सकिन्छ र शैली मिलाइएको।
के धनी छ?
त्यस्तो गम्भीर laminating रूपमा shag लागि परीक्षण पछि, लागू गर्न सकिन्छ कस्मेटिक्स Estel चिन्ह। यो व्यावसायिक श्रृंखला मा कमजोर कपाल डाई लागि विशेष चम्कने शैंपू छ। तिनीहरूले ओक्सीकरण प्रक्रिया रंग कपाल मा रोक्न भनेर आफ्नो संरचना विशेष पदार्थ मा समावेश र परिणामस्वरूप नयाँ रंग थप स्थिर हुन्छ। Keratin र प्रोटीन, धनी स्याम्पु "Estel" जो, तिनीहरूलाई हेयर ड्रायर शैली गर्न, चमकदार सुकाउने गर्न सजिलो र आज्ञाकारी बनाउन, को किसिमहरु-सुकेको moisturize गर्न।
उपचार सीधा रंग, विपाटन वा keratin पछि किसिमहरु ठीक गर्न आवश्यक गर्नेहरूले प्रयोग bezsulfatny स्याम्पु "Estel" OTIUMAQUA वा TrueAquaBalance श्रृंखला।
आफ्नो मदत पाएर त्यहाँ आफ्नो संरचना बलियो थप मइस्चराइजिंग कपाल हो। बाल अत्यन्तै नरम र चमकदार हुनेछ। प्रत्येक स्याम्पु ट्रेडमार्क sulfates सामग्रीहरू बिना कुनै पनि प्रकारको मास्क, balms र conditioned संग संयुक्त गर्न सकिन्छ।
दिन! हरेक छैन
पोषक मा पातलो र कमजोर ताले अर्थपूर्ण बनाउन, दृढ "Estelle" firming जटिल को एक श्रृंखला प्रदान गर्दछ। सबै कि बाल विकास प्रोत्साहित र आफ्नो हानि प्रक्रिया कम गर्न आवश्यक छ - आफ्नो संरचना त्यहाँ भिटामिन, एमिनो एसिड, lactose, दूध प्रोटिन हो। को शैम्पू "Estel" हरेक दिन प्रयोग गर्न बाल विकास लागि सिफारिस गरिएको छैन, वा टाउको को छाला को जलन पारित छैन भूल छैन। एक विशेष अर्थ छ कि ती धन, यो सबै भन्दा राम्रो अन्य नरम सरल शैंपू संयोजनमा प्रयोग गरिन्छ, भनेर तिनीहरूलाई वैकल्पिक छ।
कस्मेटिक्स Estel रूस, को बाल्टिक राज्य अमेरिका मा सबै शहर मा थाहा छ। यो हावा-कंडीशनर र balms, स्याम्पु र "Estelle"। उत्साहित ग्राहकहरु को समीक्षा आफु को लागि कुरा। उत्पादनहरूको पक्षमा तथ्यलाई द्वारा प्रमाणित छ कि 2011 आफ्नो उच्च गुणवत्ता र अनुपालन संसारमा स्वीकार स्तर संग, युरोपेली बजार मा जारी गर्न बाल धन्यवाद को पुनर्वास र पुनर्निर्माण गर्ने उद्देश्यका लागि एक विशेष प्रयोगशाला मा विकसित भइरहेको छ जो कस्मेटिक्स। "Estelle" उत्पादनहरु जर्मनी, पोल्याण्ड, बेल्जियम जस्ता देशहरूमा देखा पर्नुभयो। आफैलाई एक भव्य उपहार के र तपाईं - ब्रान्ड Estel चयन! आफ्नो बाल चम्कने स्वास्थ्य गरौं!
केश मा चित्रकला - स्टाइलिश र मूल
आज सुशील कपाल सीधा गर्छन्?
त्यहाँ महिला एक हर्मोन विफलता छ किन?
VAZ-2110, आफ्नै हात को रियर ब्रेक पैड प्रतिस्थापन
के "stalemate" गर्छ? Stalemate - यो ..
कुंभ कुंभ फिट छ? कुंभ मानिस, महिला कुंभ: प्रेममा अनुकूलता
एथेना - ग्रीक पौराणिक कथाहरु मा युद्ध को देवी र बुद्धि
क्रस चिकित्सा: मूल, मूल्य र विवरण
एक चिमनी तातो-पानी ताप संग ओभन। पानी ताप सर्किट संग भट्टीमा समीक्षा
गोफन Backpacks: प्राप्त गर्न चाहे?